Golaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta magacaabay Saddex Safiir – STAR FM SOMALIA
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta oo khamiis ah kulankoodii joogtada ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xeerkii Madaxweynaha ee meel marinta hanaanka doorashada dadban 2016, magacaabida saddex safiir, arrimaha amniga iyo fatahaada wabiga Shabelle ee Beledweyn.
Kulankan oo uu shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ugu horeyn waxaa lagu soo dhoweeyay xeerkii Madaxweynaha Soomaaliya uu ku meel mariyay hanaanka doorashada dadban ee sanadkan 2016, taasoo horay Xukuumadda ugu gudbisay baarlamaanka, balse markii ay adkaatay ansixinta Baarlamaanka uu Madaxweynuhu xeer uu soo saaray ku meel mariyay.
Golaha Wasiirada ayaa ka dooday soo jeedin ay sameysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo aheyd magacaabista saddex safiir oo kala ah Yuusuf Garaad Cumar oo horay u soo noqday Madaxii Laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, C/wahaab Macalin Maxamed Xaaji Aadan iyo Cabdi Aadan Diiriye.
Saddexdan xubnood ayaa Golaha Wasiirada waxay u ansixiyeen in loo magacaabo Safiiro buuxa, hase ahaatee waxaa wareegto ku soo magacaabi doono Madaxweynaha Jamhuuriyada oo saddexdan u magacaabi doona dalal ku yaala Afrika, Aasiya iyo Yurub
Dhinaca kale Golaha Wasiirada ayaa kulankooda waxaa warbixin looga dhageystay Wasiiro dowladaha Amniga Daa’uud Maxamed oo ka hadlay tallaabooyin lagu sugayo amniga Caasimadda iyo gobollada dalka, si looga hortago falal argagixiso oo kooxaha nabaddiidku ay sameeyeen bisha barakeysan ee Ramadan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka iyo Beeraha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka xilligaan haysta shacabka ku dhaqan Gobolka Hiiraan, kuwaasoo ka dhashay fatahaada uu sameeyay wabiga shabeelle qaybta uu ka maro Gobolka Hiiraan. Wasiirka ayaa sheegay xaalad adag in ay ka jirto halkaasi, isagoo xusay wasiiro ka tirsan Xukuumadda in ay gaareen si ay qiimeyn ugu sameeyaan dhibaatada. Isagoo xusay in hay’adaha gar-gaarka ay kala hadleen sidii halkaas loo gaarsiin lahaa gurmad deg deg ah.
Sidoo kale Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Waxbarashada Mudane C/laahi Bile Nuur ayaa tilmaamay in maalinta sabtida ah ee soo socota ay bilaaban doonaan Imtixaannaadka guud ee dugsiyada sare ee dalka, waxana ay wasaaraddu sheegtay dhammaan daladaha ka jira dalka iyo Wasaaraddu in ay ku mideysan yihiin Imtixaanka. Isla markaana lagu qaban doono inka badan 64 xarumood oo ku kala yaala Caasimadda iyo gobollada dalka.
Ugu dambeyn Shirka Golaha Wasiirada ayaa lagu ansixiyey Siyaasadda Qaran ee (Gender), waxaana golaha warbixin ka siisay Wasiirka Haweenka iyo Horrumarinta Xuquuqul Insaanka Sahro Maxamed Cali Samatar oo sheegtay in sharcigani muhiimad gaar ah u leeyahay ilaalinta xuquuqda Haweenka.